Chess kpakpando Georgian na -ebo Netflix ebubo maka ịkpọ ya onye Russia
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » fim » Chess kpakpando Georgian na -ebo Netflix ebubo maka ịkpọ ya onye Russia
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Crime • omenala • fim • Akụkọ na -agbasa na Georgia • News • ndị mmadụ • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Netflix ji nkwuwa okwu na ụma ghara ụgha maka mmezu nke Gaprindashvili maka ebumnuche dị ọnụ ala na nke enweghị atụ nke 'ime ka ihe nkiri ahụ dị elu' site n'ime ka ọ dị ka dike akụkọ ifo jisiri ike mee ihe ọ nweghị nwanyị ọzọ, gụnyere Gaprindashvili, mere.
Onye mmeri chess nke Georgia na -ebo Netflix ebubo mkparị maka igosipụta ya na usoro ihe nkiri ha.
Netflix boro ebubo na ọ na -edina nwoke na nwanyị nke ukwuu, ma bụrụkwa onye ụgha na usoro onyonyo ha.
Nona Gaprindashvili gbara akwụkwọ ebubo ebubo nkwutọ ya megide Netflix n'ụlọ ikpe Federal District na Los Angeles.
Nona Gaprindashvili bụ onye ama ama chess nke Georgia etinyela akwụkwọ nkwarị $ 5 nde megide Netflix maka ịbụ 'nwoke na-edina nwoke nke ukwuu' ma gosipụta ya dị ka onye Russia na usoro 2021 kụrụ 'The Queen's Gambit'.
Nona Gaprindashvili, nwanyị mbụ rutere ọkwa onye ọkaibe chess mba ụwa na onye mmeri chess nke ụwa nke ise, gbara akwụkwọ megide Netflix maka ntụnye aka na ya na ihe ngosi kacha elu, na -egosipụta akụkọ ifo nke na -aga n'ihu iti ndị egwuregwu Russia kacha mma. na Moscow n'afọ ndị 1960.
"N'ime otu ihe nkiri malitere na 1968, onye na -ekwu okwu kwuru na onye ọkpụkpọ chess Nona Gaprindashvili ahụtụbeghị ụmụ nwoke. Mana nke a ezighi ezi, "onye ọka iwu Maya Mtsariashvili, onye mmekọ na BLB, ụlọ ọrụ iwu Georgia na -anọchite anya onye ọkpụkpọ ahụ, kwuru taa.
Ọkaiwu gbakwụnyere na ọrụ ha na ikpe a bidoro obere oge ka emechara Netflix Mwepụta usoro TV.
Gaprindashvili, 80, ewepụtala akụkụ na akụkụ ikpeazụ nke usoro na -akọwa "naanị ihe pụrụ iche gbasara ya" ịbụ okike ya.
“Ọbụna nke ahụ abụghị ihe pụrụ iche n'ime Russia, ”Akụkụ nke ihe omume ahụ na -aga n'ihu. "Enwere Nona Gaprindashvili, mana ọ bụ onye mmeri ụwa na ọ hụtụbeghị ụmụ nwoke."
N'okwu ikpe nkwutọ ya gbara akwụkwọ na Courtlọikpe Federal District dị na Los Angeles, Gaprindashvili kọwara na nke ahụ bụ "ọ bụ ụgha, yana ịbụ onye na -edina nwoke na nwanyị nke ukwuu," ma kwuo na ka ọ na -erule 1968, o nwetala opekata mpe 59 nwoke chess. ndị egwuregwu.
Mkpesa ahụ gara n'ihu:Netflix ji nkwuwa okwu na ụma ghara ụgha maka mmezu nke Gaprindashvili maka ebumnuche dị ọnụ ala na nke enweghị atụ nke 'ime ka ihe nkiri ahụ dị elu' site n'ime ka ọ dị ka dike akụkọ ifo jisiri ike mee ihe ọ nweghị nwanyị ọzọ, gụnyere Gaprindashvili, mere. ”
Akwụkwọ ikpe ahụ kwukwara na Gaprindashvili na -akparị site n'eziokwu na Netflix kọwara ya dị ka onye egwuregwu Russia.
Ndị nnọchi anya Gaprindashvili na -ekwukwa na nkọwa nke Georgian dị ka Russian bụ ikpe nke "ịkwakọba na mkparị ọzọ maka mmerụ ahụ" ma na -ekwu ọtụtụ ebubo maka mmekọrịta dị n'etiti mba abụọ a.
Onye na -ekwuchitere Netflix kwuru, "Netflix nwere nkwanye ugwu dị ukwuu maka Ms Gaprindashvili na ọmarịcha ọrụ ya, mana anyị kwenyere na nkwupụta a enweghị uru ọ ga -agbachitere okwu a."